Ndakamusvira nyoro ndikaita sendichabvarura beche nekunakirwa – Makuhwa.co.zw
Ndakamusvira nyoro ndikaita sendichabvarura beche nekunakirwa. Zvakatanga taenda kumeeting kuoffice kwaHeadmaster sezvo maexam ainge asvika so, ndaitamba hangu nephone yangu ndichiona hangu mapictures emboro yangu neavamwe vasikana andinotora patinosvirana hedu kumba kwangu. Kamwe kateacher kemaths kainge kakagara kumashure kwangu kaidongorera nepaside ndokuona mapics ese ini handina chandaizva ipapo. Kazonyora mufoni mako ka message zvikanzi stop showing us that traumatising pono yako. Guys kutaura chokwadi ndakanyara zvekunyara zviya.
Ndakabva ndadzima foni ndokuisa mupocket there and there.
Ndakangoti regai ndizokaona after meeting totaura zvedu ndichikumbira ruregerero. The lady was looking gorgeous masasi eharare compared to other young ladies at my school. Apa akaisa kaperfume kainhuhwirira ndofunga i Chanel 5 chete, nzara ndakaitwa manicure kumeso kwakaitwa makeup yakapenga black opa. Takaita break a bit ndobva tabuda apa nyadzi dzakandibata kauya kwandiri ndokundishaudha, hanzi is this what you do in Zim that you move around showing people pono. What do you teach our children here unofanirwa kuva disqualified. Ndainge ndoita sebenzi ipapo. Ndakakumbira ruregerero but hapana akanzwa.
Tapinda hedu musecond half yemeeting. Ini ndabva ndapedzisira kupinda mumeeting ndokugara kumashure shure ndokubva kauya kuzogara next to me tiri kumashure kwevamwe vose. Aaaaa kakaisa ruoko nepasi petable kakatanga kubabata mboro yangu after kabva kundipopotera apa yakabva yaita danda. ko ini nekutya handina kuda kuita nharo. Ini ndatoziva kuti ndikamubatawo ingatoita nyaya basa rikapera. Ndakaramba ndaka tenser zvangu ndichitopindurawo mubvunzo yaibvunzwa. Ndangozoti wait babie we will definately have it after meeting and she just nodded her head ndikaziva kuti yachata. Kana vanhu makanzi muchasvirana chokwadi it’s easy hapana kana any obstacle.
Handina chandakazombonzwa meeting yese ndaive ndofunga makoiriro andaida kuzomurovera. We had our lunch na 12 ini ndakadya light kuitira zvaiva mberi hazvidi wakagutisa. Takapinda mumota yangu Nissan ndokuenda kumba apa landlord wangu akatondimaka nenyaya yekuuya nema babe ari different every day. Tasvika muroom ndikabvisa hembe dzandaive ndakapfeka ndokusara neka short apa ndagara handipfeki panti kubva ndiri mudumbu ramai vangu. Mboro yangu yakatobhenda kuita banana. Babe rakabva rabvisawo hembe maSouth Africans kuda mboro kwavo kwakawoma. Akabva asara neg-string with matching braa, she didn’t hesitate kundiudza kuti kaive katota kare kotongoda iyo without kubatwa batwa. Ndakatora macondomu angu ikozvino ndakangwara ndakatenga box rine 150 macondms maflavours akasiyana siyana.
MBORO yemunhu mukuru inonaka ndakasvirwa naBaba veBest Friend Yangu